County Clare Ecohouse Ireland Bipụ na Grid, Bipụta Earthwa!
Home » Ndepụta » County Clare Ecohouse, Ireland
Sq Na: 2000
Live Green na Ireland
Du uwem nte ekemde ye isọn̄. Hapụ obere akara ukwu ma bie ndụ grid na County Clare ecohouse. Inye mmiri site na usoro mmiri ozuzo edozi na nchekwa mmiri lita 12,000. Heating bụ site na a multi-manu stovu nke heats 5 radiators na 2 towel rails tinyere mmiri ọkụ. Ugbo ahụ na-enye nkụ juru ebe niile. Ndị ụlọ ọrụ ike na-enye ọkụ eletrik mana nhọrọ maka ịchụpụ kpam kpam gụnyere foto fotovoltaic, geothermal, ma ọ bụ ikuku ikuku.
Stunning County Clare Ecohouse maka Sale
Ntuziaka ndị a na Derrynaneal bụ site na obere ọdọ mmiri na nkedo ígwè, na-agafe ọdọ mmiri na ọkara n'ime ụzọ ifufe. Nabata na Derrynaneal n'ime ime obodo Ireland.
Aha ahụ, Derrynaneal, pụtara 'oké ọhịa nke dị n'ígwé ojii' na Irish ma gosipụta ihe a maara dịka otu n'ime akụkụ kachasị nsọ nke oke ọhịa nke Aughty nke si n'ebe ugwu ruo n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke County Clare afọ gara aga.
Enweghị deer na mpaghara ndị gbara ya gburugburu nke a County Clare ecohouse yana n'ihi njikwa ala nke onye nwe ya, ụmụ nke oke ọhịa ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-agbanwe agbanwe na osisi oak na-apụta n'ofe ala ahụ.
"Nke a bụ ebe ndị hụrụ osisi n'anya ma jiri osisi rụọ ọrụ."
Ọtụtụ ihe na-adị nwayọ na jụụ ebe a, mana oke ala dị na-emetụ gị aka ka ị na-agafe obere ụlọ ahụ; ihe 3½ acres nwere ebe obibi nke 70 umu ọgwụ, ọgwụ squirrels, ugbo, hares na uzuzu uzo uzo uzo.
Na-ebi ebe a, ị ga-akwụghachi gị site na ndị na-akụ egwú na-eto eto n'oge opupu ihe ubi, oke egwu nke hen harers na oge ụfọdụ nke ugo na-acha ọcha na-ebi nso. Lough Derg, otu n'ime ihe ndị kasị dị omimi nke ọdọ mmiri ndị dị na Ireland.
Onye nwe County County Clare Ecohouse ugbu a bụ onye ọkà n’ihe banyere ihe ọkụkụ na gburugburu ebe obibi ma ọ rụọla ọrụ iji bulie ọtụtụ ụdị dị iche iche dị na mbara igwe. A na-etinye ogige n'ihu akwụkwọ nri na akwukwo nri na akwa mkpụrụ osisi nwere nnukwu polytunnel na-arụpụta ihe; ọhịa - birch, beech, ash, rowan na oak n'etiti ndị ọzọ - na-enye mmanụ ọkụ kwa afọ maka stovu ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmiri na-enweghị oke nke mmiri mmiri ozuzo na-elekọta ụlọ ahụ. Enwekwara nke ọma, agwụ ike 11 afọ gara aga, enwere ike weghachite ya. Ka ọ dị ugbu a, enwere sistemu brọdband abụọ, ma akara edoziri na satịlaịtị na-enye ịntanetị ngwangwa na ntụkwasị obi. Maka onye nwere mmasị na ọrụ, ọkụ eletrik bụ ihe achọrọ iji mee ka ụlọ nwee onwe ya.
Ọ bụ ebe obibi na ebe dị jụụ, ma, nke a bụ Clare ecohouse bụ ihe ọ bụla ma dịpụrụ adịpụ. Ennis, obodo a ma ama bụ 25 nkeji ụgbọala; Galway na Limerick na-erughị otu awa; Osimiri Dublin 2½ na International Shannon na uzo okporo ụzọ na US na UK bụ naanị 40 nkeji. Okirikiri ala dị ebube na ebe dị iche iche nke Burren bụ ebe mara mma na-agafe ugwu. Nke a bụ ebe zuru oke maka ndị ọkachamara na ụlọ, ndị edemede, ndị na-ede akwụkwọ na ndị na-ahụ maka ọdịdị anụ ọhịa ndị nwere ike ịghọta anụ ọhịa ndị mara mma; ìhè dị nro dị ebube na ụlọ na gburugburu ebe obibi udo.
Lelee Video Ecohouse
Maka ndị chọrọ ụlọ ọrụ dị nso, obodo obodo dị na Tulla na-eto eto na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ọhụrụ nakwa na ọ ga-adị anya ịnya isi egwuregwu egwuregwu na ntụrụndụ. East Clare bụ karịa karịa ọtụtụ akụkụ nke Ireland, ndị si n'akụkụ Europe nile na ebe ndị ọzọ na-adọta ebe a site n'ụlọ akwụkwọ Steiner; site na Irish Seed Savers nke nwere otu n'ime ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke ala na omenala apụl dị na Europe; maka ohere ịnweta ndụ ntụpọ carbon, na maka ọtụtụ ọdọ mmiri dị na mpaghara maka ịkụ azụ, kayak na mmiri na-agba mmiri.
Ahịa: $ 350,000
Obodo: County Clare
Koodu mpaghara: V94T9PV
Afọ Wuru: 2006
Ụkwụ Square: 2000
Nke gara agaWaterlọ Mmiri Mmiri USVI dị na Magens BayIhe na-esoteNnukwu Acreage Ranch
Waterlọ Mmiri Mmiri USVI dị na Magens Bay